राजु लामाले पाहिलोपटक सुनाए जीवनका दु:खका दिन (भिडियोसहित) -योहोखबर
राजु लामाले पाहिलोपटक सुनाए जीवनका दु:खका दिन (भिडियोसहित)
काठमाडौँ - हाल सिंगो संसार घरभित्र स्व(बन्दी छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो विपद्का रूपमा देखापरेको कोरोना भाइरसले मानव जातिकै गति र लय ठप्प पारिदिएको छ । द्रुत रफ्तारमा अभ्यस्त भइसकेको आधुनिक जीवनशैली पर्खालभित्र खुम्चिन बाध्य छ ।
कोभिड–१९ बाट दुई सयभन्दा बढी देश आक्रान्त छन् । लाखौँ मानिस संक्रमित छन् । हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् । भौतिक क्षतिको कुरा गर्ने हो भने विश्व अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस भइसकेको छ ।
नेपाल पनि कोरोनाको सन्त्रासबीच बाँचिरहेको छ । हालसम्म नेपालमा कोरोनाबाट दुई जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ३ सय ५७ जना संक्रमित भेटिएका छन् । उत्तरी छिमेकी चीन कोरोना र दक्षिणी छिमेकी भारतमा संक्रमितको संख्या बढ्दो छ र यता सारा नेपालीको त्रासको आयतन पनि बढ्दो छ ।
राजधानी काठमाडौँ यतिखेर सुनसान छ । भीडभाड, कोलाहल र व्यस्तताको पर्याय यो शहरको गति थामिएको छ ।
लकडाउनको पालना गर्दै मानिसहरू घरभित्र बसिरहेका छन् । यस्तो समयमा कस्ता मानसिक समस्या आउन सक्छन् ? यो समयलाई कसरी गीत,संगीले सहज र सरल बनाउने ? अदि विषयमा योहो टेलिभिजनको पीएल सो (PYL SHO) कार्यक्रमा मङ्गोलियन हार्टका प्रमुख गायक राजु लामासंग गरिएको कुराकानी । यो समयमा गायक राजु लामाले बाहिर घुम्ने कार्यक्रम पनि तत्काल स्थगित गर्नु परेपछि उनी अहिले आफ्नो घरमै बसिरहेका छन् ।
कोरोनाले गर्दा गायक लामाको गीत, संगीतको सम्पूर्ण काम रोकिएको छ । उनी भन्छन, ‘मेरो गीतको सबै काम रोकिएको छ । अहिले घरमै बसेको छु ।’
गायक लामाले सांगीतिक महोत्सव, विदेश यात्रा समेत तत्कालका लागि रोकिएको बताए । थप जानकारीका लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोस् ।
६ दिन अघि २०७७ जेष्ठ ०५ १९:१६ मा प्रकाशित